३३ प्रतिशत महिला नपुग्दा नेकपालाई टेन्सन, आयोगले खोजे के गर्ने ? – www.agnijwala.com
३३ प्रतिशत महिला नपुग्दा नेकपालाई टेन्सन, आयोगले खोजे के गर्ने ?
काठमाडौं , १४ जेठ – नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विघटन भएर बनेको नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी नाम र केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व नपुगेका कारण निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको छैन । पार्टी दर्ताका लागि जेठ ३ गते नै आवेदन दिएको भए पनि निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म दर्ता प्रमाणपत्र दिएको छैन । आज ९सोमबार० नवगठित पार्टीका नेताहरु सुवास नेम्वाङ, देव गुरुङलगायतले आयोगमा पुगेर ४४१ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर, नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी तथा अन्य आवश्यक विवरण बुझाएका छन् ।
विवरण बुझाएपछि प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेम्वाङले पार्टी दर्ताको प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताए । यद्यपि, उनले आयोगमा निवेदन दिएको आधारमा नै सञ्चारमाध्यमले पार्टीको नाम लेख्नुपर्ने जिकिर गरे । आयोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी आयोगमा दर्ता भइसकेकाले सोही नाममा अन्डरलाइन गरेर आयोगमा निवेदन दिइएको हो ।
पार्टीका अर्का नेता देव गुरुङले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधत्वको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू भईनसकेको जिकिर गरे । आयोगले खोजेमा महाधिवेशनपछि ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउने उनको भनाइ थियो ।